जनरल इन्स्योरेन्सले आइपीओका सबै रेकर्ड तोड्यो | 24onlinenews | Digital News Paper | डिजिटल पत्रिका
१५ आश्विन २०७७ ०७:३१
जनरल इन्स्योरेन्सले आइपीओका सबै रेकर्ड तोड्यो
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको आइपीओमा बुधबार अन्तिम दिन आवेदनको बाढी लागेको छ । सिडिएससीका अनुसार हिजो बुधबार आइपीओ आवेदन गर्ने अन्तिम दिन अपरान्ह ५ बजेसम्म आइपीओ खरिदका लागि ८ लाख ११ हजार ९०० जनाले आवेदन दिएका छन् । उनीहरुले २ करोड २५ लाख १० हजार ८८० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो तथ्यांक नै अन्तिम भने होइन किनभने आस्वा प्रणालीबाट समेत आवेदन दिइने भएकाले यो तथ्यांक अझ बढ्नेछ । यसअघि रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्समा ६ लाख १४ हजार आवेदन परेकोमा आज जनरल इन्स्योरेन्सले सर्वाधिक आइपीओ आवेदनमा रेकर्ड ब्रेक गरेको छ ।
यो कम्पनीको आइपीओमा अस्ति तेस्रो दिन १ करोड ९१ लाख ८६ हजार भन्दा बढी कित्ता खरिदका लागि आवेदन परेको थियो । तेस्रो दिन कुल ६ लाख १४ हजार भन्दा बढीको अचाक्ली आवेदन परेको थियो । यो कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० दरका रु. ३० करोडबराबरको आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेकोमा सर्वसाधारणका लागि भने २७ लाख ५० हजार कित्ता मात्र छुट्याइएको छ ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता रु. १०० दरका ३० लाख कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको २७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी ७० करोड रुपैयाँ छ। आईपीओ बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले डबल बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो रेटिङले यस्ता संस्थाहरु वित्तीय दायित्वहरुको समयमै सेवा पुर्याउने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम भएको मानिन्छ। यस्तै कम्पनीको आईपीओले केयर एनपी आईपीओ ग्रेड ४ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। ग्रेडमा प्रयोग गरिने प्लस चिह्नले यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउँदछ।